ကိုယ်ဟာဘ၀ကိုတစ်ယောက်ထဲဖြတ်သန်းဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီလား? – Trend.com.mm
Posted on April 7, 2019 April 2, 2019 by Shun Lei Phyo
တစ်ချို့ တွေဘ၀မှာ တစ်ယောက်တည်းဖြတ်သန်းဖို့ကို အော်တို Signature ကပါလာတတ်ပြီးသား…တော်တော်များများ အပျိုကြီးလူပျိုကြီး နဲ့ဘ၀ကို တစ်ယောက်တည်းဖြတ်သန်းနေကြတဲ့သူ တော်တော်များများရဲ့အပြုမူတွေကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်သိပ်မကွာတတ်ကြဘူး။ သူတို့တွေရဲ့ခံယူချက်ေ တွ၊ စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ အမူကျင့် တွေကတူလို့လည်းအခုလိုတစ်ကိုယ်တည်းဘ၀သမားချင်းလာတူနေကြတာ ပေါ့လေ။ ဆိုတော့…ဘယ်လို လူမျိုးတွေက ဘ၀ကို တစ်ယောက်ထဲဖြတ်သန်းဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ ပုံစံနဲ့သူမျိုးတွေလည်းဆိုတာ ကြည့်ကြည့်လိုက်နော်…(၃) (၄) ချက်လောက်တူနေရင်ေ တာ့ သင်လည်းတစ်ကိုယ်တည်းဘ၀ကို နှစ်မြို့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ပဲ… 😛
– ဘယ်အရာမဆိုကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာ ကျေနပ်အားရတတ်ကြတဲ့သူမျိုး၊ သူများကို အားကိုးရမှာ အထူးသဖြင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လိင် ပေါ်သိပ်ပြီးမှီကိုးအားထားခြင်းမရှိတဲ့စိတ်မျိုး။
– ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်တယ်။ ဘယ်သူ့အတွက်ရယ်မှကိုယ့်ရဲ့အကျင့် တွေကို ပြုပြင်ပေးဖို့စိတ်ကူးမရှိပဲ သည်းခံ နိုင်ရင် နေ လေဆိုတဲ့စိတ်မျိုးထားတတ်သူများ
-ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်အစစ်မှန်ကိုထုတ်ပြဖို့ လွန်စွာဝန် လေးတတ်သူ
– ရှုံးရမှာ ကြောက်တဲ့သူ (ဥပမာ ချစ် ကြောင်းများပြလိုက်ရင် ကိုယ့်ကိုငြင်းလိုက်မလားဆိုတဲ့မာန က ရှေ့ ရောက်နေရင်လည်း အဆင် မ ပြေနိုင်ပါဘူး)
-သိပ်စဉ်းစားတတ်တဲ့သူ၊ ဘယ်အရာမဆို တအားစဉ်းစားပြီးတအားရွေးတတ်တဲ့သူမျိုးပါ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် ချေးများတတ်တဲ့သူမျိုးပါ။
-တစ်ယောက်တည်းနေရတာကို နှစ်ခြိုက်တဲ့သူ ။ သူများအတွဲ တွေRo နေပြီချစ်နေကြပြီဆိုရင် အလကားအပို တွေလိုမြင်တတ်နေပြီဆိုရင်ေ တာ့ သေချာပါပြီ ။
-မသည်းခံနိုင်သူ။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်သူရည်းစားရယ် လက်တွဲဖော်ရယ်ဖြစ်လာရင်တော့ နားလည်မှု တွေသည်းခံမှု တွေနဲ့ ကျင့်သားတော့ရှိနေရမှာပါပဲ။ဒီလို တွေတစ်ဖက်သားကိုသည်းခံရတာ နားလည်ရတာပင်ပန်းတယ်ထင်ရင်ေ တာ့တစ်ကိုယ်တည်းသမားဖြစ်ဖို့ လမ်းမြင်နေပါပြီ။
တဈခြို့ တှေဘဝမှာ တဈယောကျတညျးဖွတျသနျးဖို့ကို အျောတို Signature ကပါလာတတျပွီးသား…တျောတျောမြားမြား အပြိုကွီးလူပြိုကွီး နဲ့ဘဝကို တဈယောကျတညျးဖွတျသနျးနကွေတဲ့သူ တျောတျောမြားမြားရဲ့အပွုမူတှေကတဈယောကျနဲ့တဈယောကျသိပျမကှာတတျကွဘူး။ သူတို့တှရေဲ့ခံယူခကျြေ တှ၊ စိတျဓာတျတှေနဲ့ အမူကငျြ့ တှေကတူလို့လညျးအခုလိုတဈကိုယျတညျးဘဝသမားခငျြးလာတူနကွေတာ ပေါ့လေ။ ဆိုတော့…ဘယျလို လူမြိုးတှေက ဘဝကို တဈယောကျထဲဖွတျသနျးဖို့ အသငျ့ဖွဈနတေဲ့ ပုံစံနဲ့သူမြိုးတှေလညျးဆိုတာ ကွညျ့ကွညျ့လိုကျနျော…(၃) (၄) ခကျြလောကျတူနရေငျေ တာ့ သငျလညျးတဈကိုယျတညျးဘဝကို နှဈမွို့သူတှေထဲကတဈယောကျပဲ… :-P- ဘယျအရာမဆိုကိုယျတိုငျလုပျရမှာ ကနြေပျအားရတတျကွတဲ့သူမြိုး၊ သူမြားကို အားကိုးရမှာ အထူးသဖွငျ့ဆနျ့ကငျြဘကျလိငျ ပျေါသိပျပွီးမှီကိုးအားထားခွငျးမရှိတဲ့စိတျမြိုး။- ကိုယျလုပျခငျြတာလုပျတယျ။ ဘယျသူ့အတှကျရယျမှကိုယျ့ရဲ့အကငျြ့ တှေကို ပွုပွငျပေးဖို့စိတျကူးမရှိပဲ သညျးခံ နိုငျရငျ နေ လဆေိုတဲ့စိတျမြိုးထားတတျသူမြား-ကိုယျ့ရဲ့စိတျခံစားခကျြအစဈမှနျကိုထုတျပွဖို့ လှနျစှာဝနျ လေးတတျသူ- ရှုံးရမှာ ကွောကျတဲ့သူ (ဥပမာ ခဈြ ကွောငျးမြားပွလိုကျရငျ ကိုယျ့ကိုငွငျးလိုကျမလားဆိုတဲ့မာန က ရှေ့ ရောကျနရေငျလညျး အဆငျ မ ပွနေိုငျပါဘူး)-သိပျစဉျးစားတတျတဲ့သူ၊ ဘယျအရာမဆို တအားစဉျးစားပွီးတအားရှေးတတျတဲ့သူမြိုးပါ။ ရှငျးရှငျးပွောရရငျ ခြေးမြားတတျတဲ့သူမြိုးပါ။-တဈယောကျတညျးနရေတာကို နှဈခွိုကျတဲ့သူ ။ သူမြားအတှဲ တှေRo နပွေီခဈြနကွေပွီဆိုရငျ အလကားအပို တှေလိုမွငျတတျနပွေီဆိုရငျေ တာ့ သခြောပါပွီ ။-မသညျးခံနိုငျသူ။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျခဈြသူရညျးစားရယျ လကျတှဲဖျောရယျဖွဈလာရငျတော့ နားလညျမှု တှေသညျးခံမှု တှနေဲ့ ကငျြ့သားတော့ရှိနရေမှာပါပဲ။ဒီလို တှေတဈဖကျသားကိုသညျးခံရတာ နားလညျရတာပငျပနျးတယျထငျရငျေ တာ့တဈကိုယျတညျးသမားဖွဈဖို့ လမျးမွငျနပေါပွီ။ကဲ…ဘယျနှဈခကျြ လောကျကိုယျနဲ့ကိုကျနလေဲ?
စမတ်ကျတဲ့မိန်းက လေးဖြစ်ဖို့မ ချွေတာသင့်တဲ့ အရာများ…
မိန်းက လေးတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ အိုမင်းခြင်း ဟော်မုန်းများ အ ကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း